warkii.com » Director-kii Padman”Ranbir iyo Alia jilaa ka jiliin fiican hadii la helo isqaraabeysi inuu jiro waan aqbali”
Director-kii Padman”Ranbir iyo Alia jilaa ka jiliin fiican hadii la helo isqaraabeysi inuu jiro waan aqbali”
Geerida Sushant Singh Rajput kadib waxaa soi laba kacleeyay mowduucii isqaraabeysiga oo si weyn loo hadal hayaa mudo bil ah waxaana mudadan ka hadleen shaqsiyaad caanka ah shirkadaan oo Filimsameyaal iyo jilayaal isugu jiraan.
Shaqsiyaadkii ugu dambeyeen ee ka hadleen arinkaan waxaa kamid ah Filimsameyaha caanka ah R.Balke oo sameeyay aflaam hirgaleen sida Paa iyo Padman waxuuna aaminsanyahay jiilka maanta in Ranbir Kapoor iyo Alia Bhatt hogaaminayaan dhanka qaab-jiliinka.
Waxuu yiri isagoo is qaraabeysiga ka hadlaayo tusaalena usoo qaatay Ranbir iyo Alia,”ereygaan wuu soo noq noqday balse waxaad ogaataan Bollywood kaliya inuusan ka jirin ee aduunka meelwalba aad tagtid kaaga horeeyo.”
“Haddii jilaa hormar weyn lagu gaarsiin karo isqaraabeysi waxaa marhore gaari lahaayen maqaam sare jilayaal badan balse waxaa xaqiiq ah in meeshan qof walba kartidiisa ku joogo iyo sida daawadayaasha kaga heleen is qaraabeysi waa laguugu keeni karaa shirkada laakiin maqaam sare laguuguma gaarsiin karo.”
“Jiilka maanta waxaa ugu fiican Ranbir Kapoor iyo Alia Bhatt oo hormar wacan gaareen marka aan kasoo tagno guulahooda bal mala heli karaa jilayaal iyaga ka qaab jiliin fiican waxaana xaqiiq ah inee iyaga ugu jiliin fiican yihiin waqtigaan hadii la keeno jilayaal iyaga meel kusaari karaan qaab jiliin markaas waxaan qiran doonaa in is qaraabeysi jilaaga hormar lagu gaarsiin